Shiil Gaari oo ka dhacay duleedka Magalaada Garowe - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Shiil Gaari oo ka dhacay duleedka Magalaada Garowe
Shiil Gaari oo ka dhacay duleedka Magalaada Garowe
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magalaada Garowe, waxaa shil baabuur ka dhacay duleedka magalaada kaas oo keenay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Shil gaadiid ayaa ka dhacay tuulo lagu magacaabo Shire Dhogor-libaax oo ku taalla inta u dhaxeysa magaalooyinka Garowe iyo Qardho ee Puntland.
Wararka ayaa sheegaya in Shilka uu yimid ka dib markii gaadiid xamuul ah oo isku dhacay, waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyootay laba qof, sidoo kale dhaawacyo ayaa la sheegay inay jiraan. Warbaahinta deegaanada Puntland ayaa ku soo warantay in shan gaari oo xamuul ah ay isku dhaceen, kuwaas oo burbur badan uu soo gaaray, sidoo kale hanti badan ayaa la sheegay inay ku khasaartay shilkaas.
Dhanka kale shilkaas ayaa dhacay saqdii dhexe ee xalay, waxaana la sheegay in meydadka dadkii ku dhintay ay xalay ku hoos hoydeen gaadiidkii la qogmaday oo ku fariistay. Saraakiil ka tirsan ilaalada waddooyinka Puntland ayaa saakay warbaahinta u sheegay inay gurmad u direen halka uu shilkaas ka dhacay.
Previous articleGaraad Cabdullaahi Cali Ciid oo lagu aasay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag
Next articleLetter to Somalia Authorities on Gololey Investigations